Trump, Sacuudi Carabiya, Heshiiska $350ka Bilyan, Yemen, Iran & Walaac Biloow ah – Radio Daljir
Trump, Sacuudi Carabiya, Heshiiska $350ka Bilyan, Yemen, Iran & Walaac Biloow ah
May 24, 2017 6:15 g 1
Riyaad – Trump oo qalalaase siyaasadeed oo mug weyni uu ka haysto dalkiisa ayaa farxad siyaasadeed kala laabtay Sacuudi Carabiya iyo Guriga Reer Sacuud. Trump iyo Boqor Salmaan waxa ay wada saxiixeen heshiis lagu qiyaasay in ka badan $350 bilyan oo isugu jira hub iyo maalgelin Sacuudigu maalgashanayo shirkado Maraykan ah iyo mashaariic kala duwan.
Laakiin sida jaraa’idada Bariga Dhexe ay soo bandhigeen “farxadda Trump dan ma u tahay danta fog ee Sacuudiga iyo tan Bariga Dhexe?”
Siyaasiyiinta falaanqeeya arrimaha Bariga Dhexe ayaa isu-soo-dhawaanshaha siyaasaadda xukuumadda Trump iyo tan Sacuudigu waxay ku abuurtay walaac cusub, waxaana la is weydiinayaa “Sacuudiga oo sidii qiimaha shidaalku hoos ugu dhacay abaaraystay, dhib weyn oo siyaasadeed iyo mid milaterina uu ka haysto Yeman, ma u dan baa in uu $350 bilyan ku wareejiyo Maraykanka!”
Trump oo hadaladu ka fakadaan baa asaga oo la hadlaya saxaafadda xafladdii saxiixa heshiiska kabacdi wuxuu yiri, “maanta waa maalin aan marnaba la heli karin oo farxadi ku dheehantahay. Boqollaal bilyan oo doolar baa Sacuudigu maalgashanayaan Maraykanka, taasina waxay noo abuuraysaa shaqooyin, shaqooyin, iyo shaqooyin loo baahanyahay. Marka waa muhiim in aan saaxibaday Sacuudiga u mahadceliyo.”
Lacagta badankeeda ayaa Sacuudigu waxay ku iibsanayaan hub, sida uu sheegay Xoghaye Rex Tillerson, waxaana loogu talagalay in looga hortago Iran.
Iran ayaa ku jawaabtay in aysan cidna duullaan ku ahayn ee ayada duullaan lagu yahay.
Siyaasadda & Shidaalka
Dawladda Sacuudigu waxaa sanadahaan soo wajahay qalaaso siyaasadeed, mid dhaqaale, iyo su’aalo joogto ah oo jiritaankeeda taabanaya ayna ka mid tahay “Sacuudigu xasillooni ma ku sii jiri karaa?” Marka laga tago qalalaasaha dhaqaale ee hadda soo foodsaaray, waxaa Sacuudiga dul heehaabaya dabaylo siyaasadeed oo ay ugu weyntahay dullaankiisa Yemen.
Sacuudiga ayaa sannadkii 2015 ku duulay Yemen, dhammaan kaabayaashii dhaqaalaha dalkana burburiyey. Dagaalka Yaman ayaa illaa iyo hadda la macnayn la’yahay danta Sacuudigu ka leeyahay, in kasta oo lagu macneeyo “kahortagga Xuutiyiinta iyo siyaasaada Iran.” Laakiin dadka u kuurgala siyaasadda Yaman iyo tan sacuudiga ayaa ku macneeya in ay “shidaal salka ku hayso, dagaalkuna sabab u yahay in aysan marna Yeman si xor ah shidaal ula soobixin, ayada oo mar hore la xaqiijiyey in ceelasha shidaalka Sacuudiga iyo kuwa Yaman ay isku il yihiin.”
Iran iyo Saamaynteeda Siyaasadda Sacuudiga
Dalka Iran ayaa beeniyey in uu wax lug ah ku leeyahay siyaasadda Yeman, uusanna wax taageero ah u fidin Xuutiyiinta iyo qabaa’ilada la safan.
Dalka Iran ayaa hadda soo gabagabeeyey doorasho xor ah, oo mar kale dib loogu doortay Madaxweyne Xasan Rooxaani. Iran oo in ka badan 30 sano ay saarnayd cunoqabatayn dhinac kasta ayaa ah dal horumar la taaban karo dhinacyo badan ka gaaray, siiba dhinaca waxbarashada iyo taknoolajiyadda. Sidoo kale Iran ayaa hadda looga baqaa in ay awoodo in ay gaarto horumar dhanka hubka nukliyeerka iyo gantaalada ridada dheer ee gana hubkaas.
Heshiiska caalamku la gaaray Iran ayaa ku salaysan baqdintaas, ayada oo lagu heshiiyey in Iran aysan samaysan hubka nukliyeerka, baddalkeedana laga qaaday cunaqbanayntii saarnayd. Sacuudigu marnaba raalli kama ah in Iran lala heshiiyo, waana sababta Sacuudiga iyo xukuumaddii hore ee Obama ay isku maandhaafeen.
Dhanka isgaarsiinta casriga ah iyo hubeynta internetka (cyber warfare) Iiraan waxaa lagu tiriyaa dalalka safka hore ku jira. Dhanka darooniska (drones) ama diyaaradaha aan duuliayaha lahayn ee dagaalka, Iran ayaan iyana hormar baaxad leh ka gaartay dhankaas ayada oo sannadkii 2011 si casri ah oo cilmiyaysan cirka kula wareegtay, lana soo degtay daroon Maraykanku leeyahay.
Sacuudiga fkf Iran
Sacuudiga ayaa Iran u arka dal u socda in uu bariga dhexe la wareego, wax taageero ahna aan ka helin xukuumaddii hore ee Obama, meesha Obama uu qaaday cunoqabatayntii saarnayd Iran.
Iran ayaa Sacuudiga u aragta dal aan wax hormar ah awoodin oo kaliya ku tiirsan iibka shidaalka iyo awoodda Maraykanka.
Iran oo xooggeeda labaad uu yahay Ururuka Xisbullah ee Lebnaan oo kaligi u dhigma dawlad, ahna awoodda kaliya ee iska difaacday dagaal ay Israaiil soo qaado, guulana ka gaaray, ayaa hadda la garab ah dalka Siiriya, guulo waaweyna ka gaaray xulufada Sacuudiga ee ka soo horjeedda xukuumadda Assad ee Siiriya. Sacuudiga ayaa xulufada sii xoogasanaysa ee Iran, Xisbullah, iyo Siiriya u araka awood cusub oo loo tabar la’yahay.
Boqor Salmaan & Trump
Boqor Salmaan oo martiqaad sare ku soo dhaweeyey Trump, marnana aan dhinaciisa ka dhaqaaqin, lahaana abaabulka in la wiiqo xukuumadda Siiriya, ayaa laga soo wariyey welwelka uu boqorku ka qabo arrimaha Siiriya. “Siiriya waxay ahaan jirtay dal hormaray. Macallimiinta waxay nooga imaan jireen Siiriya. Boqortooyadeyda bay u shaqayn jireen. Laakiin nasiibdarro dalkoodii way burburiyeen. Dal dhan daqiiqado baa lagu burburin karaa, laakiin in dib loo dhiso waa hawl adag,” ayuu Boqorku yiri.
Boqor Salmaan marna ma uu soo hadalqaadin dalka Yemen. Boqorku marna ma uu soo hadalqaadin warbixintii Qaramada Midoobay ee ahayd in duullaanka Sacuudigu sabab u yahay in dadka Yemen ay maanta gaajo la il-daranyihiin oo uu duullaanku wada cayreeyey.
Trump wax jawaab ah kama bixin walaaca Boqorka.
Dhanka ladagaallanka argagixisada, Trump wuxuu si cad farta ugu fiiqay dalka Sacuudiga, wuxuu ku amray in ay wax ka qabtaan tababarada masaajidada iyo Jaamacadaha Riyaad iyo Jidda ay la garab taaganyihiin xagjirka iyo waliba in Sacuudigu joojiyo lacagaha uu ku bixiyo madraasadaha ama dugsi-quraanada ku yaal Bakistaan, Yemen, Suudaan, iyo Soomaaliya, laguna tababaro ardeyda u najaxda argagixiso tababaran.
HR McMaster, Lataliyaha Ammaanka Qaranka ee Trump, oo wax laga weydiiyey sida Sacuudigu uga dhabaynayo joojinta gacansiinta argagixisada adduunka ee la wada ogyahay, ayaa ku jawaabay “indhahayagu waa shan, waana daalacanaynaa sida Sacuudigu uu u dhaqmo.”
Dhallinyarada Sacuudiga oo loo tababaray xagjirnimada mabda’a Wahaabiyadda ayaa ah kooxaha ugu tirada badan ee ku biira ururada al-Qaacida iyo Daacish.
Siyaasadda Sacuudiga oo ah laba garab waxaa garabka xukunka huggamiya reer Sacuud, dhanka kale ee garabka reer Muhammad ibn Abd al-Wahhab waxay masuul ka yihiin garabka diinta, waana kuwa loo yaqaan Wahaabiyiinta. Heshiis mar hore, waa xilligii aasaaska Guriga Sacuud, ay labadaas gabar wada gaareen baa ahaa in uusan midna midka kale faragelin, khayraadka dalkana si siman loo qaybsado. Sidaas darteed lama hubo in Boqor Salmaan uu arrimaha kahortagga xagjirnida kala tashaday garabka Wahaabiyiinta ee dalka Sacuudi Carabiya.
Dhanka hubka casriga ah ee laga iibinayo Sacuudiga, Washington DC waxaa mar hore ka biloowday walaac laga qabo in hubkii Sacuudiga laga iibiyo uu gacmo kale oo aan lala rabin gaari karo. Dhanka siyaasadda oo labadii maalmood ee ugu danbeeyey ay qaraxyo ismiidaamin ah oo khasaare mug weyn ka dheceen magaalooyinka Manchester iyo Bossaso, waxaa mar hore walaac laga muujiyey doorka uu Sacuudigu ka qaadan karo ladagaallanka aragagixisada caalamka iyo joojinta dhiirigelinta xagjirnimada.
Yaab Badanaa! (dhegayso: Dhallinyaro Shabaaboow Shufta ah …)
sheikh mohamoud jama 1 year
trump waa ku qaldanyahay faragelinta
diinta islaamka ee muqadaska ah kuwa ujiibinayaana waa lamid xaga denbiga argagixisaduna waa trump iyo kooxdiisa